တူ WinToFlash သင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် Multiboot ပြောင်းယူအက်စ်ဘီမောင်းပြတင်းပေါက်များနှင့်အတူတည်ဆောက်ခြင်းကို၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ linux ကို၊အော့ဖ်ဗိုင်းရပ်၊ဒေတာဆယ်တင်ရေး၊ဟာ့ဒ်ဝဲစမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်ပင်ပြေးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ပြတင်းပေါက်ကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်များကနေသွားကြဖို့တစ်အက်စ်ဘီအတွက်ကိုယ့်စုံတွဲတစ်တွဲ၏မောက်စကိုနှိပ်!
WinToFlash ကိုဖန်တီးနိုင်အပြောင်းအအက်စ်ဘီနှင့်အတူမည်သည့်ခေတ်သစ်ပြတင်းပေါက်တော့ခ်နှင့်ဆာဗာမိသားစု။ မည်သည့်ဒေါသအသုံးပြုနိုင်ပါသည်-အလုပ်လုပ်တယ် ၁၀၊နေအိမ်မှအဆုံးစွန်သော၊၃၂ သို့မဟုတ် ၆၄။
အော်တို-ဒေါင်းလုပ် ISOေMultiboot စဥ်အက်စ်ဘီ
WinToFlash ဆော့ဗ်ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် Multiboot စဥ်အက်စ်ဘီကနေအင်တာနက်နှင့်အခါႏွအပေါ်ထား၊ပံုစံမ်ားအယူအက်စ်ဘီ၊တပ်ဆင် bootloader၊ဖန်တီးဖက္မွာရွေးချယ်ရေးနူးနှင့်စစ်ဆေးမှုများဖိုင်စနစ်အမှားအယွင်းများအတွက်သင်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်။
ဘယ်လိုအကြောင်း ၅ မတူညီတဲ့ပြတင်းပေါက်ဗားရှင်း၊တိုက်ရိုက် linux ကို၊အော့ဖ်ဗိုင်းရပ်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ CD ပေါ်တစ်ခုတည်းအပြောင်းယူအက်စ်ဘီမောင်း? ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်မှာအားလုံး! ယခုသင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် Multiboot စဥ်အက်စ်ဘီနှင့်အတူန့်အသတ်အရေအစဥ်ပစ္စည်းများအပေါ်ယူအက်စ်ဘီမောင်း။ WinToFlash ထောက်ခံပါတယ်၏ဖန်တီး Multiboot စဥ်အက်စ်ဘီမောင်းနှင့်အတူမည်သည့်ပြတင်းပေါက်ကနေဖက်ကိုပြတင်းပေါက် ၁၀။
WinToFlash ခဲ့သည်ခံရဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖန်တီးခြင်း၏အစဥ်၊installable များ၏မိတ္တူအပေါ်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုမီးေမောင်းငါသည်အစဉ်အမြဲအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်ကျိန်းသေအထိနျးအဘို့အသင့်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကၡာျ။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းပြီးအများအားဖြင့်သိသာပါတယ်။ သင်ပြောပြ WinToFlash ရှိရာတပ်ဆင်ခဖိုင်များကိုသင်ချင်မှလွှဲပြောင်းတည်ရှိပြီးနှင့်ဖြစ်စေကြကုန်လွှဲပြောင်းကာ္ပိုေ၏စောင့်ရှောက်မှုယူမှု၊သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချိန်ညှိတူအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအမီးေမောင်းထုတ်ခံရလိမ့်မည်။
အောင်ကိုဆက်ပတ္သားမောင်းများအတွက်ပြတင်းပေါက် ၇ သောသူအပေါင်းတို့သည်မဖြစ်လှည်၊ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အတွေ့အအက္ပ္မ်ားရိုးရှင်းစွာအမှုအရာ။
အဲကိုခေါ်ဆော့ဗ်ဝဲတခု WinToFlash ကြောင်းအရာအားလုံးကိုပါဘူး။ သင်ပြုလိုအပ်သမျှအပြေးအစီအစဉ်များ၊ထား၏တည်နေရာပြတင်းပေါက် ၇ တပ်ဆင်ခ disc နှင့်ဦးတည်ရာများသင့်ရဲ့ဖိုင်များကို။
ဒေါင်းလုပ်ဆောင်၊အမေရိက၊စတင် wintoflash။exe။ အမွတ္ installers။ ကော်ပီကူးဖို့အသင့်"င္လွ်င္ျပင္ပါ"၊ဒါကြောင့်အသုံးဝင်သော။
ရ WinToFlash ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်အခမဲ့!